ओली सरकारका दुई ठूला गल्ती
काठमाडौं । शक्तिशाली भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति ठूलो नागरिक अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै समग्र सरकारी कामकारबाहीले नागरिक आशामा क्रमशः तुषारापात भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका केही गतिविधि नसुहाउने र विवादास्पद हुन थालको छ । त्यसमध्ये एक हो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित ओली बंश अक्षय कोषको कार्यक्रम ।
ओली बंश अक्षय कोषको वार्षिक साधारणसभा एवम् सम्मान, अभिनन्दन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवासमा भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरमा टेण्ड टाँगेर कोषले कार्यक्रम ग¥यो । जहाँ पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सम्मानीत भएको कार्यक्रमपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालसँगै चारैतिरबाट टिप्पणी भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासलाई आफ्नो वंशको कार्यक्रम गर्ने थलो बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासलाई आफूसम्बद्ध पार्टीको पार्टी कार्यालय जसरी प्रयोग गरेको टिप्पणी भइरहेकै बेला बालुवाटारमा ओली बंशको कार्यक्रम भएको हो । आयोजकले मैतीदेवीको एक पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले व्यस्तता र सुरक्षाका कारण आफ्नो निवासमै कार्यक्रम गर्न सुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा मनखुसी कार्यक्रम हुनु गलत भएको टिप्पणी सर्वत्र छ । र, आयोजक पनि प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्नो बंशको कार्यक्रम गर्न पाएकोमा खुसी छैन । उनीहरुले वाध्यताबश प्रधानमन्त्री निवासमा कार्यक्रम गर्नु परेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा कार्यक्रम भए पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सबै खर्च अक्षय कोषबाटै भएको बताइएको छ । कार्यक्रम जहाँ भए पनि आफूहरुले सरकारी स्रोत साधनको दूरुपयोग नगरेको, उनीहरुको दावी छ ।
कोषको कार्यक्रममा आफू सम्मानीत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजकप्रति आभार व्यक्त गरे । सरकारी निवासमा आफ्नो बंशलाई कार्यक्रम गर्न दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समृद्धि र सुशासनको भाषण दिन भने छाडेनन् । सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग एउटा पाटो हो, त्यो भन्दा बढी प्रवृत्तिको सवाल हो । प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो बंश, पार्टी वा समूहको कार्यक्रम सरकारी निवासमा राख्न नदिनु पर्ने हो । तर किन आयोजकले बाहिर कार्यक्रम गर्न खोज्दा पनि उनले सरकारी निवासमै बोलाए ? समृद्धि र सुशासनका ठूलाठूला भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री किन यसरी झिनामसिना कुरामा चिप्लिरहेका छन् ?
त्यस्तै ओली सरकारले गरेको दोस्रो ठूलो गल्ती हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको पुनःनियुक्ति । झाको पुनर्नियुक्ति ओली सरकारको ‘अनुहार’मा लागेको अर्को दाग हो । चार महिना अगाडि सरकारले झालाई काम गर्न रोक लगाएको थियो भने अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति ‘होलसेल’मा खारेज गर्दा झा पनि पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले झालाई पुनःबहाली गरेको थियो । तर, उनले मुद्दा फिर्ता लिएर पदमा फर्किने बाटो बनाए । र, अन्नतः बिहीबार सरकारले उनलाई पुनःनियुक्ति ग¥यो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै गोकुल बास्कोटाले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका काम–कारबाहीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयकै पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि समितिले झा ‘दोष’रहित नभएको निश्कर्ष दिएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १५ गते झालाई प्रशासनिकबाहेक कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उनै झा चोखिएर पुनः नियुक्त हुनु ‘रहस्यमय’ छ नै ।
छानविन समितिले झामाथि लगाएका अभियोग:
– ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स वितरण लगायतमा पारदर्शी नभएको, जथाभाबी सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणलाई घाटा पु¥याएको ।
– प्राधिकरणको ठेक्कापट्टादेखि अनुसन्धानसम्मका काममा अनियमितता गरेर लाभ लिएको । सेवाप्रदायकका कमजोरीमा कारबाही नगरेको ।
– प्राधिकरणको लेखा प्रणाली कमजोर बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट अघि बढ्ने भनिएका अयोजना बढाउन नसकेको । ती आयोजना पनि सम्पन्न भए÷नभएको अध्ययनै नगरी भुक्तानी दिएको ।
– प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको र त्यसकै कारण आर्थिक चुहावट भइरहेको । चाबहिलमा भवन बनाउन परामर्शकै नाममा धेरै खर्च गरेको ।
मन्त्रीले नै बनाएको छानबिन समितिले झाको काममा खोट देखाएर प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले उनलाई प्रशासनिकबाहेक अरु कुनै काम नगर्नू भनी पत्र लेख्यो । यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले कसरी झाको नाम फेरि सिफारिस ग¥यो र उनी पुनः नियुक्त भए ?
झाकै अयोग्यताका कारण ठप्प थियो प्राधिकरणका योजना:
– झालाई काम नगर्ने लिखित निर्देशन दिएयता प्राधिकरणका १६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका आयोजना पाँच महिनादेखि ठप्प छन् ।
– प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ‘ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन’ राख्न अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजना अघि बढाएको थियो । यसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, ४ र ५ मा युटिएल, ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमलाई विस्तारको जिम्मा दिएको थियो । दस अर्ब लागतको यो आयोजनामा वैशाखदेखि कुनै काम अघि बढेको छैन।
– एक वर्षभित्र देशभरका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा ५१५ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन १८ परियोजना सुरू गरेको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक छनोट गरेर सञ्चालन हुने यो परियोजनाका सबै काम पाँच महिनादेखि ठप्प छन् ।
– कुनै पनि नयाँ अनुमति र टेलिकमको क्षमता विस्तारजस्ता काम नगर्नू भन्ने सरकारको निर्देशनले प्राधिकरणसँगै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् । इन्टरनेट पहुँच नभएका ठाउँमा कसैले इन्टरनेटमा आधारित सेवा सुरु गर्न चाहे त्यस्तो सेवा सुरू हुने छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले भिस्याट प्रयोगकर्ताको अनुमति दिनुपर्छ, जुन रोकिएको छ।
– इन्टरनेट पहुँच नभएकै कारण दुर्गम ठाउँमा बैंक शाखा स्थापनामा पनि अवरोध छ । भिस्याट प्रयोगका लागि केही बैंकले निवेदन दिए पनि अनुमति दिन सकिरहेको छैन।
– असोजमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको प्राधिकरणले दसैं, तिहारपछि मात्र ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्छ । फागुन र चैतसम्म ठेक्कापट्टा सकिएर वैशाखदेखि काम सुरू हुने बेला मन्त्रालयले निर्देशन दिएर रोकेपछि गएको वर्ष प्राधिकरणले कुनै पनि काम गर्न सकेन ।
यति धेरै काम रोकेर सरकारले झालाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि नियतमा ‘शंका’ उब्जिन्छ नै । वैशाख १५ मा त अयोग्य, अपारदर्शी भनेर काम नगर्न निर्देशन दिइएको झा भदौ २१ गते एकाएक कसरी पुरानै जिम्मेवारीका लागि योग्य भए ? अवकाश पाउने उमेरमा पुगेका झाले चार वर्ष लामो नियुक्ति पाउनुले पनि धेरैले प्रश्न उठाएका हुन् ।